Fitokanana Fotodrafitr’asa tao amin’ny Kaominina Ambonivohitra Arivonimamo – Sénat de Madagascar
October 8, 2018 Michel Hervey ANDRIANIRINA
Fotodrafitr’asa telo lehibe no notokanan’ny Fitondram-panjakana tao amin’ny Kaominina Ambonivohitra Arivonimamo Faritra Itasy ny Zoma 05 Oktobra 2018. Tonga nitokana izany ny Filoham-panjakana Rivo RAKOTOVAO niaraka tamin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona mpisolo toerana RANDRIAMBOLOLONA Mananjara notronon’ireo Loholon’i Madagasikara avy amin’iny Faritra Itasy iny.
Fanamboarana ny lalana tao an-tampon’ny tanàna, fanavaozana ny Kianja filalaovam- baolina ary kianja filalaovana iraisana na “COMPLEXE SPORTIF”. Teo ihany koa ny fananganana toeram-pamonoana omby sy kisoa manara-dalàna sy ara-pahasalamana izay tena ilaina any amin’iny Faritra iny, mba tsy hisy intsony ny famonoana omby sy kisoa eny anelankelan-trano.
Nambaran’ny Filoham-panjakana Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO fa fanambin’ny Fitondram-panjakana sy tamberin’andraikitra ho an’ny vahoaka izao fanatsarana fotodrafitr’asa izao ary entina indrindra hanaporofoana fa manantanteraka izany ny Fitondram-panjakana.
Nambarany ihany koa fa efa lasa ny tolo-bidy amin’ny hanaovana famatsiana rano fisotro madio eto amin’ny Kaominina Arivonimamo.
Nandritra ity lanonam-pitokanana ity koa no nanoloran’ny Filoham-panjakana mivady, izay zanaky iny Faritra iny, Fiarabe fandraofam-pako ho an’ny Kaominina. Nahazo ny anjarany ihany koa ny Tanoran’ny Imamo, izay nanomeny fitaovam-panatanjahantena. Ny Minisiteran’ny Fambolena sy ny Fiompina kosa dia nanolotra zanak’akoho miisa 2500 ho an’ny mpiompy rehetra any Arivonimamo ho entina hanatsarana ny fiharian’izy ireo.